Maqaalka Michael Grigsby Martech Zone |
Maqaallada by Michael Grigsby
Marka waxaan marwalba dooneynaa inaan ogaano sida marcom (isgaarsiinta suuqgeynta) u shaqeyneyso, gaadiid ahaan iyo olole shaqsi ahaanba. Qiimeynta marcom waa wax caadi ah in la shaqaaleeyo tijaabada A / B fudud. Tani waa farsamo ay muunad aan kala sooc lahayn ay ku soo baxaan laba unug oo loogu talagalay daaweynta ololaha. Mid ka mid ah unugyada ayaa la baarayaa unugga kalena ma helayo. Kadibna heerka jawaabta ama dakhliga saafiga ah ayaa la barbardhigayaa labada unug. Haddii unugga tijaabada uu ka fiicnaado unugga xakamaynta